Naturedị Europe na ọdịdị ala kpaliri akụkọ ifo. Ala ndị sara mbara bụ ebe obibi nke ụzọ ụkwụ njem dị ịtụnanya nke na-eduga na ụfọdụ n'ime ebube ndị kachasị ịtụnanya n'ụwa. Ọgba ndị a ma ama na Họngarị, a Grand Canyon nwere mmiri pọmig na France, ice-palaces in Austria, na…
Inggagharị na ịchọpụta ebe ndị ọhụrụ na-enye anyị nku nrọ, amaja, ma mụta. N'ụwa zuru oke n'ụwa a, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịhụ ihe niile, ọ gaghịkwa ekwe omume ịnụ na ịnụ ụtọ ebe niile na Europe. Na ọtụtụ ebe na-atọ ụtọ, you can only…
Njem ụgbọ oloko bụ ụzọ kachasị eji eme njem na Europe. Ya mere, offọdụ n'ime ụgbọ oloko kacha dị ụgbọ ala n'ụwa niile na Europe na oge ụfọdụ, n'ụwa. N’agbanyeghi na igwe mmadu juru n’oge, elu 5 traingbọ okporo ụgbọ ala kachasị dị na Europe dị…